ईनै हुन् एकै परिवारका ६ जनाको हत्या गर्ने लोक बहादुर कार्की, यस्तो छ बयान ! – hamrosandesh.com
ईनै हुन् एकै परिवारका ६ जनाको हत्या गर्ने लोक बहादुर कार्की, यस्तो छ बयान !
सोमबार बिहान खेत गोड्न आउँछु भनेका लोकबहादुर नआउने भएपछि तेज बहादुरल लोक बहादुरलाई हप्काएर अरु खेताला खोज्न निस्किएका थिए । घरमै आएर हप्काएर गएका तेजबहादुरलाई बाटोमा कुरेर बसेका लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेर हत्या गरेको खुलेको छ । तेजबहादुरलाई हत्या गरेको पत्नी कमला र बुहारी रञ्जनाले घरबाट देखेपछि दोडिँदै जाँदा घरनजिकै रहेको खोला छेउमा दुवैलाई उनले ह्यामरले हिर्काएर हत्या गरे ।
आमा र हजुरआमालाई हत्या गरेको ८ वर्षका विपिन र पाँच वर्षीया गोमाले देखेपछि प्रमाण मेटाउन लोकबहादुरले उनीहरुलाई पनि लखेटेर घरदेखि माथिको खरबारीमा हत्या गरेका थिए । त्यसपछि घरमा पसेर लोकबहादुरले कुँडो पकाइरहेकी ८४ वर्षीया पार्वतीको हत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । मृतक सबैको टाउकोमा चोट लागेको छ ।
लोकबहादुरको साथबाट घरदेखि रगत लागेको कपडा र हथौडा जस्तो हतियार बरामद भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । उनी दीर्घ रोगी रहेको खुलेको छ । प्रहरीले उनीमाथि तीन दिनदेखि सोधपुछसँगै निगरानी गर्दै आएको थियो ।